Indlela yokuzoba isicwangciso sendlu kwikhompyuter? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokuzoba isicwangciso sendlu kwikhompyuter?
Ukuzoba isicwangciso sendlu, ungasebenzisa inkqubo edumileyo qu; Photoshopquot ;. Le nkqubo ikwi-Intanethi. Akukho sidingo sokukhuphela, ukubhalisa. Fumana inkqubo kuyo nayiphi na injini yokukhangela, vula kwaye uzobe kwimpilo. Emva koko unokugcina, uprinte.
Sebenzisa i-intanethi inkqubo ye-HouseCreator kwi-Intanethi, ekuvumela ukuba uyilo ngokukhawuleza kwekhaya lakho, khetha izixhobo kunye nezixhobo, ubone imodeli emithathu yendlu kwaye ubale iindleko zayo kwaye ubukele ividiyo ukuze icace ngokupheleleyo indlela yokusebenzisa inkqubo, ithamsanqa kwiiprojekthi zakho.
Kule mihla, kukho inani elaneleyo leenkqubo ezahlukeneyo ukusombulula le ngxaki.
Ukongeza, kukho iinkonzo zasimahla kwi-Intanethi onokuthi ngazo uzobe ucwangcisa indlu.
Ngokukodwa, umntu unokuhlulahlula iinkqubo ezikhethekileyo njenge:
Umzekelo, inkqubo ye-AutoCad yeyona ixhaphakileyo phakathi koku kungasentla, ukongeza, inonxibelelwano olulula.
Usenokusebenzisa inkqubo edumileyo ye-Corel Draw.
Ewe kunjalo, ukuze ubume bazobe ngokufanelekileyo, kufuneka wazi iziseko zokwenza umzobo, kwaye kananjalo unyamezele.
Njengenketho, kwaye kulungile kakhulu. Ukuba kukho inkqubo yeCorel Draw yayo nayiphi na inguqulelo, inokusetyenziselwa ukudweba zombini iiplani kunye nembono yokwakha, ifenitshala kunye nezinto zangaphakathi. Kwaye oku kunokwenziwa ngokulula.
Kukho inkqubo yeJamani 3d ArCon yoyilo lokwakha. Ikuvumela ukuba udale iiplani zomgangatho wezakhiwo, kukho amathala eencwadi anefanitshala kunye nezinto zombane, ukubalwa koqikelelo. Andazi ukuba ingaba ihlawulwe na okanye hayi, siyifundile kwiziko (kunokwenzeka ukuba ihlawulwe, kodwa kukho imiqobo).
Kwakhona, ukuzoba isicwangciso sendlu, ungasebenzisa inkqubo emnandi njenge AutoCad, ndicinga ukuba wonke umntu uvile ngayo. Kukho imodyuli yemizobo ye3. Kodwa kwisicwangciso, umzobo onamacala amabini anele.
I-3D yeKhaya emnandi yinkqubo yasimahla, kwanele ukuhamba ngokubhaliswa simahla kuyo. Kwaye
zama kwi-intanethi ukwenza isicwangciso sendlu, kubandakanya ulungiselelo lwefanitshala .. Kukho ithuba lokumpompa amathala eencwadi awongezelelweyo.
exhonyiweyo ukwakhiwa nokulungiswa
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,272.